VaChamisa Voronga Kusangana naVaMnangagwa Kuti Vakurukure Zvinetswa
MDC-T inotungamirwa naVaNelson Chamisa inoti pane vachiri muchiuto vari kushanda mukomisheni inowona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission, ZEC, zvainoti izvi zvichaita kuti sarudzo dzegore rino dzive sarudzo dzisina kujeka.
Vachitaura nevatori venhau pamuzinda webato ravo paMorgan Richard Tsvangirai House muHarare apo paizivikanwa pachinzi paHarvest House, VaChamisa vati pavashandi vose vari muZEC pane zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana zviri kushandira komisheni iyi zvavanoti hazvisi pamutemo.
VaChamisa vati izvi ndizvo zvezvimwe zvavakatarisira kuzeya nemutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, pamusangano wavakakumbira mutsamba yavakanyorera mutungamiri wenyika.
VaChamisa vatiwo kana nhuna dzavainadzo panyaya yekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo dzisina kugadziriswa, havasi kuzopinda musarudzo idzi.
Mutauriri waVaChamisa, VaLuke Tamborinyoka, vati bato ravo rakatoita tsvagiridzo iyi vachiti vachaburitsa mazita evari muchiuto ava avo vavanoti vari kushandira ZEC.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZEC panyaya iyi sezvo sachigaro weZEC, Amai Priscilla Chigumba, vati vanga vari mumusangano patavabvunza nezvenyaya iyi.
Asi masvondo mashoma apfuura, Amai Chigumba vakaudza vatori venhau kuti muZEC maive nevshandi vaimbove mauto, mapurisa uye magadhi jeri vanosvika zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana.
Asi vamwe vashandi veZEC vasina kuda kudomwa nemazita vatataura navo vabvuma kuti mune vachiri muchiuto vavanoshanda navo kunyange hazvo vati havanyatsoziva huwandu hwevanhu ava.
Zvichakadai, Muzvare Linda Masarira, avo vari kukwikwidza vakazvimirira muHarare Central musarudzo dzeparamende vaudza Studio7 kuti kana chiri chokwadi kuti muZEC mune vari muchiuto uku kunenge kuri kutyora bumbiro
Muzvare Faith Musarurwa avo vari kuda kukwikwidza sarudzo dzeparamende vakamirira MDCT, vati Amai Chigumba vanofanira kubuda pachena kuti vanhu vavanoshanda navo kumahofisi kwavo ndivanani.
Vatiwo kana ZEC ichida kuti pasave nemakakatanwa pane zvichabuda musarudzo inofanira kuti vanhu vanoshanda mumahofisi ayo vave vanhu vanobvawo kumapato akasiyana-siyana.
Sangano reZimbabwe Democracy Institute rakaburitsa gwaro gore rapera rinoratidza kuti vari muchiuto vakapinzwa mumapazi akawanda ehurumende kusanganisirawo nemuZEC.
Pasi pebumbiro remitemo, ZEC haibvumidzwe kupinza basa vanhu vachiri kushanda muchiuto, muchipurisa, kanawo mamwe mapazi ehurumende.
Asi vakasiya basa muhurumende, mungave muchiuto, kana muchipurisa nemamwe mapazi ehurumende, vanobvumidzwa kushanda muZEC.